कसैले नसोचेको चिनियाँ मिडियामा यस्तो आयो काठमाडौंको फोटोफिचर हेर्नुहोस ! – Life Nepali
कसैले नसोचेको चिनियाँ मिडियामा यस्तो आयो काठमाडौंको फोटोफिचर हेर्नुहोस !
काठमाडौँ। अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको नेपाल भ्रमण र नेपालसँग भएको सम्झौताको विषय निकै चर्चामा छ । ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशालीमध्येका एक मानिएका’ व्यक्तिको भ्रमण को चर्चा भैरहेको छ । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ भर्खरै स्वदेश फर्के । एक्काइसौं शताब्दीमा नेपालको भ्रमणमा आउने सी पहिला चिनियाँ राष्ट्रपति हुन् । यसभन्दा पहिले राष्ट्रपति सीका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जियाङ जेमिन सन् १९९६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
यसै क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बारेमा भइरहेको दृश्य चिनियाँ सञ्चार माध्यममा काठमाडौंको फोटोफिचर छापिएको छ ।सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा छापिएको फोटोफिचरमा नेपाल—चीन सम्बन्ध अमर रहोस्, जनगणतन्त्र चीनको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा बधाई लेखिएका स्वागतद्वारका तस्बिर पनि समेटिएका छन् । यस्तै काठमाडौको मुख्य भू–भागका सडकहरु पनि तस्बिरमा देखाइएका छन् । तस्बिर शेन विडुओले खिचेको जनाइएको छ ।
Previous हजारौ नेपाली भएको ठाउँ जापानमा शक्तिशाली भूकम्प र आँधी आयो, झन्डै ५१ लाख मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो !
Next जम्मू-कश्मीरमा पाकिस्तानीले गरेको गो’लि प्र’हारबाट गोर्खा जवान सुवास थापाको दु:खद नि’धन !